Imifanekiso yabasetyhini egcwalisa izitalato kunye nothungelwano ngemiyalezo yabo | Abadali be-Intanethi
Imizekeliso yobufazi egcwalisa izitalato kunye nothungelwano ngemiyalezo yabo
Iris Gamen | 29/03/2022 22:12 | Ukuphefumlelwa
NgoMatshi 8, i uSuku lwaManina lweHlabathi; apho uninzi lwabo lwaya ezitratweni ukufuna kungekuphela nje ukulingana kwezoqoqosho, inkcubeko kunye nezopolitiko, kodwa nokulingana kwezentlalo. Ukuphakamisa amazwi abo, kwabo bangakwaziyo, bathi bakhona, ngokuchasene nayo yonke into engathandekiyo kwaye abayi kuthi cwaka.
La ukubonakala kwentshukumo yabasetyhini, kubaluleke kakhulu ukunika ilizwi kuyo yonke imiba efanelekileyo loo nto inento yokwenza nabafazi. Ngomhla we-8 ka-Matshi, yimini apho sinokubona indlela ubugcisa obusetyenziswa ngayo ukunika amaphiko kwintshukumo yabasetyhini.
Nantsi into esiza kuthetha ngayo namhlanje, imizekeliso yobufazi, eye yasebenza ekusasazeni imiyalezo ebaluleke kakhulu kuluntu, kungekuphela nje kubantu, kodwa kumagosa aphezulu kumazwe. Ukongeza, siza kuthiya imizobo yabasetyhini ekufuneka uyazi kwaye ube nayo njengereferensi.
1 imizekeliso yobufazi
2 Iimifanekiso zeFeminist oFumane wazi
2.3 ilali yanamhlanje
2.4 Ibhanana yeFlavite
2.5 Elisabeth ruiz
2.7 Rocio Salazar
La ukuthethelelwa kwamalungelo abantu basetyhini, kunokuqhutywa kwaye kubonakaliswe ngeendlela ezahlukeneyo, ngothotho, iimuvi, imifanekiso, umculo, amalaphu, njl. Kweli candelo, siza kukubonisa eyona mizobo ilungileyo yobufazi ongenakuyiphosa.
Abafazi bayimfuneko, uyasixelela UPatricia Bolaños kulo mzekeliso onophawu lwamanqindi aqiniweyo phezulu. Kwaye unyanisile, ngale nkcazo, abafazi bayimfuneko, abafazi bayaxhasana, bayakhuthazana, bancedisane, bavule amaphiko ethu kwaye akukho mntu ungayekiyo.
Kulo intshukumo yobufazi sonke siyalingana kwaye sonke siyalwa, icala ngecala. Umlo usaqhubeka, kuba kusekude ukuba uhanjwe. Njengoko sinokubona kule mizekeliso ka-Amelie Torres, uBe Fernández, noAna Jarén, phakathi kwabanye, loo mvakalelo yokuzabalaza nomanyano phakathi kwabasetyhini iyashukuma.
Imizekeliso emininzi esiyifumana kwiintanethi zentlalo okanye nakwimiboniso ye-8M isebenzisa isigqebelo kunye noburharha njengendlela yokunxibelelana. kunye nokubonisa ukungavumelani neengxaki ezifunyanwa ngabasetyhini kwiimeko ezithile zobomi.
Sikushiya eminye yemizekelo ekwabelwana ngayo kuthungelwano, i-spaghetti monster, uRocío Salazar, u-Arte Mapache, kunye noClarilou, phakathi kwezinye iimifanekiso ezininzi.
Asinakuyilibala loo mizekeliso enemiyalezo ethe ngqo kuluntu esiphila kulo, mhlawumbi abaveli kwiimifanekiso esinokuthi sizazi, kuba ziyindalo yobuqu, kodwa umyalezo ucace kakhulu, ukuhlonipha phakathi kwethu sonke, kunye nendlela enye yokulandela, ukulwa nokulingana.
Hermione feminist umzekeliso
Umzekeliso, yilwa namhlanje ukuze ungafi ngomso
Iimifanekiso zeFeminist oFumane wazi
Ukuba siqala ukuqokelela ngamnye wemifanekiso yabasetyhini ebanga i-8M, asinakuze siphele, kwaye luphawu oluhle. Kweli candelo, siza kuqokelela abanye babazobi abasebenza ubufazi ngemisebenzi yabo.
Umzobi uRaquel Riba, nguye lowo unike ubomi kumlingiswa kaLola Vendetta, ibhinqa elinamandla. Umzobi waseCatalan ungumseki we-ReEvolución Feminina, intshukumo enenjongo yokunika abafazi indawo abayifaneleyo kuluntu.
Kwimizekeliso yakhe, siyafumana iivignettes apho alwela ukulingana kwabasetyhini ngemizobo yemigca emihle kunye nemiyalezo enamandla.
Jone Bengoa, umfazi lowo ixhasa intshukumo yabasetyhini, ukulwa ngokuchasene nosolusapho kunye nokwaphulwa kwemithetho ebekwe eluntwini esiphila kuyo. Ikhusela ingcamango yokuba abafazi kufuneka bakhululeke ukuze bazenzele izigqibo.
Yonke le miyalezo ikhutshwa ngemisebenzi yakhe eqokelelwe kwiakhawunti yakhe ye-Instagram, sastraka, Igama lesiBasque elisetyenziselwa ukubhekisela kukhula. Uyayijika le ngcamango ukukhusela ukuba olu khula luzalelwa kwindawo kunye nexesha lokuqhawula into ephawulweyo, ukuphula imithetho.
URaquel Córcoles ligcisa ngasemva kweModerna de pueblo. Kwiiposti kwiakhawunti yakho ye-Instagram, i Umzobi usebenzisa imizobo yakhe ukunika ilizwi kwintshukumo yobufazi, phantse esoloko edlala ngoburharha.
Kwi incwadi, Idiotized: A Tale of EmpowerFairies, isibonisa ubuso babalinganiswa bayo abahlala edolophini apho uva amabinzana afana, oko akuqhelekanga kwinenekazi eliselula okanye usuku xa utshata luya kuba lolona lonwabo ebomini bakho. Xa befudukela kwisixeko esikhulu, badibana nezinye abalinganiswa ezenza ukuba bavule amehlo abo kwaye baqale ukufunda oko bafanele ngokwenene.
Umzobi waseSpain, umzobi wekhathuni kunye nomzobi, uFlavia Álvarez Pedrosa, owaziwa ngokuba nguFlavita Banana. Omnye wababonisi abanempembelelo kwilizwe lethu.
Ngemizobo yayo emnyama kunye nolwandlalo olukhululekileyo, Bathetha nathi ngezihloko ezinjengothando, usizi, ubunzima, ukungonwabi eluntwini, njl.. Umbono anawo wehlabathi kunye nendlela alidlulisa ngayo ngoburharha ushiya umntu ongakhathaliyo.
Kule meko sithetha ngo-Isabel Ruiz, umzobi kunye nombhali woncwadi lwabantwana kunye nolutsha, kunye nenjongo yokuvakalisa ilizwi kunye nokubonakala kumfanekiso wabasetyhini.. Kupapasho lwakhe, iMujeres, equlethe iikopi ezintlanu, uncoma abalinganiswa ababhinqileyo abaphawule amaxesha abalulekileyo embalini.
Kwiakhawunti yakhe ye-Instagram, uya kufumana imizekeliso enomyalezo wokuziphindezela malunga nomzobo wabafazi. Ngomfanekiso wendalo yonke enemibala, ye-surreal kunye neyasetyhini. Indalo eguqukayo, ngamanye amaxesha imibala ye-pastel, ngamanye amaxesha i-fluorine, i-glitter okanye i-psychedelic setting.
Kuye, umsebenzi wobugcisa ubaluleke ngakumbi kunomculi osemva kwawo., kuba ngumsebenzi apho ababukeli benza uqhagamshelwano.
Ngayo Ukusetyenziswa kwesigqebelo, uRocío Salazar, unxibelelana kwaye unika ukubonakala kweengxaki abasetyhini abaninzi ekufuneka bajongane nazo.. Kulo mculi, akukho prototype enye yowesifazane, kuye bonke bayasebenza.
Yaqala ngemizekeliso eyayibhekisela kwisigqibo sabasetyhini sokungachebi, yaye kwavela khona into eninzi kubo. Imizekeliso yamkelwa kakuhle ngabalandeli bakhe kwiintanethi zentlalo.
Ubuxoki kumfazi wokwenyani, yenye yeencwadi zakhe, apho athetha ngokungaqhelekanga ngothando lothando, apho bonke abafazi bacingelwa ukuba banenjongo ebomini. Kwaye yenza kucace kakhulu, Ayingabo bonke abantu basetyhini abachonga ngengcinga esoloko isetyenziswa ngokwesini kwaye balandele izivumelwano zentlalo ezimiselweyo.
Le yimizekelo embalwa yabo bonke ubugcisa malunga nentshukumo yabasetyhini esinayo ngeenxa zonke kuthi, kodwa ininzi kakhulu kwiinethiwekhi zentlalo ezifana ne-Instagram. Ngaba imisebenzi iqokelela imiyalezo yobudade, yomzabalazo, yenkululeko kunye nenkuthazo kwinguquko esele iqhuba; ngaphandle kwabasetyhini, ihlabathi liyayeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imizekeliso yobufazi egcwalisa izitalato kunye nothungelwano ngemiyalezo yabo
Iseti yebrashi ye-Illustrator yasimahla